Medicine "Formidron" kuyindlela ephumelela isinqandakuvunda, ngasesinqeni se okuyinto formaldehyde.
I nomuthi "Formidron" (incwadi yeziyalezo kuqinisekisa lokhu kwaziswa) anezakhi isinqandakuvunda futhi isiqedaphunga. Ingxenye-formaldehyde unekhono ukubhubhisa isakhiwo yezinhlayiya amaprotheni phinda. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka nomthelela omubi ku-bacterium isikhumba yisinanakazana. Lezi nezilwanyana ezincane imfihlo ukubola ethakwa umjuluko nezindlala, okuyinto kuphakamisa ukubukeka iphunga ezingemnandi izithukuthuku. Ngaphezu kwalokho, nomuthi has ukushuka izakhiwo, kunomthelela odla we Amapayipi futhi yoma we nezindlala umjuluko.
izidakamizwa akhiqizwa ifomu isixazululo ukusetshenziswa yangaphandle. Izindlela isakhiwo kuhlanganisa formaldehyde, ETHYL utshwala, amanzi kanye Cologne. Ukudayiswa iza amnyama glass amabhodlela.
Kusho "Formidron": Izibuyekezo isicelo
Imithi esetshenziswa ihlelwe ngokulandelana kwezihloko kuphela. Babephathana izandla, zokukhipha igciwane amathuluzi, Sula isikhumba izinyawo esimweni ukujuluka ngokweqile. Ngesikhathi inqubo, nomqulu omncane solution isetshenziswa isayithi oyifunayo. Usuku kwanele ukusingatha isikhumba esisodwa. Lapho esebenzisa inkulumo esetshenzisiwe ajulukayo kabili ngosuku. Izidakamizwa "Formidron" yokusetshenziswa Kunconywa ukusebenzisa ukuhlanza, isikhumba esomile for lungene isigamu sehora ke ugeze off izinsalela ikhambi kudinga kwamanzi agelezayo. Izindawo ezizwelayo kakhulu isikhumba obucayi (emakhwapheni, izintende kwabesifazane) kumele kusetshenzwe akukho kuka imizuzu amabili. Ekupheleni inqubo isikhumba wageza ngamanzi afudumele ukugijima, omisiwe futhi afafaze talcum powder. Ngemva ukushefa isicelo underarm zomuthi akufanele ngaphambili kosuku olulodwa. Manual ibonisa ukuthi izidakamizwa ngowomnikazi izidakamizwa esikhundleni anobuthi, ngakho ngaphambi kokuba uyisebenzise uma kudingeka uthintane wesikhumba. Sebenzisa ukulungiselela wathi kumele ngokuqinile udokotela, futhi kuphela kunjalo, uma kwenzeka ukuba banesizathu esizwakalayo.
Muva nje, izidakamizwa is imakethwa njengoba enhle kakhulu esebenzisa umjuluko, amantombazane amaningi bheka it njengoba uhlobo nako kungasiza. Amakhasi wengxoxo izinkundla agcwele okubuyayo, nje ekhazimulisa nekusebenta izidakamizwa kubhekwe. Kodwa ungakhohlwa ukuthi formalin, lapho izidumbu bamgqumisa e ngesisekelo ukulungiselela! Ingqikithi kuyinto - umdlavuza, ibe nomphumela ongemuhle ohlelweni sezinzwa, uhlelo zokuzala, umgudu wokuphefumula nesikhumba. A ukusetshenziswa engalawuliwe we-formaldehyde kungabangela izicubu necrosis. Ngakho ulisebenzise ukuze avikele abantu enempilo kusukela umjuluko is hhayi Kunconywa.
Medicine "Formidron" yokusetshenziswa akufanele zisetshenziswe isikhumba elikhanyayo. Ungasebenzisi isixazululo kule ndawo ebusweni. ukusetshenziswa kakhulu engathandeki zomuthi ngenkathi bekhulelwe nangenkathi bencelisa. Umsebenzi wawusuvinjelwe "Formidron" kusho elihlobene ne ubuthi okusezingeni eliphezulu. Yokusetshenziswa futhi ayikuvumeli ukusetshenziswa kwezidakamizwa e umkhuba ezingane. Lapho zisetshenziswe ngendlela efanele, amacala ukweqisa izidakamizwa, ikhambi engashiwongo.
Medicine "Formidron": imfundo, intengo, side effects
Ngenxa yalokho, ukusetshenziswa kwezidakamizwa bangezwa nemiphumela engemihle. Izibuyekezo bathi kukhona ngokuvamile ukucasuka kwesikhumba endaweni isicelo yesixazululo, zikhona komzimba (ukuqubuka, evutha, ububomvu). Izindleko imithi ku ezahlukene ruble 10-16.
Izidakamizwa "Tevastor". Yokusetshenziswa
"Berlipril": analogue, yokusetshenziswa, ngempela
Izidakamizwa "Tribestan": ukubuyekeza iziguli
Lokho amadoda akufunayo ... Futhi lokho abangafuni
Kanjani ukwenza uhlaka manicure ekhaya. amathiphu
Protractor jikelele: GOST, izici, isicelo kanye nokubuyekeza
Indlela ukuqeda inja? Indlela ukuqeda izinja ehlangeni?
Hydrogen oxide: ukulungiselela kanye izakhiwo